ပျောက်ဆုံးသွားသော ကွန့်မာန့်များအား ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း၊ ~ ဒီမိုဝေယံ
ပျောက်ဆုံးသွားသော ကွန့်မာန့်များအား ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်း၊
မနေ့က အချိန်အခက်အခဲကြောင့် ipone မှတစ်ဆင့်
(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်..)
ပိုစ့်အား တင်ခဲ့ပါသည်။ ipone မှကြည့်ရှုသူများ အနေဖြင့် ကွန်မာန့်များအားလုံး ကြည့်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါပိုစ့်၌ ကွန်မာန့်ရေးသားသူများမှ ကွန်မာန့်များ ဖတ်မရဖြစ်နေကြောင်း ရေးသားပြောဆိုလာတဲ့ အတွက် အဆိုပိုစ့်အောက်မှ ရေးသားထားတဲ့ ကွန်မာန့်များအား အများဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြန်လည် ဖြည့်စွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်..။ ထပ်မံရေးသားလိုသူများ ယခုပိုစ့်မှာ ရေးသားနိုင်ကြပါသည်..။
Friday, November 18, 2011 ဒီမိုဝေယံ 10 comments
1 Anonymous noreply-comment@blogger.com to me
show details 5:38 PM (20 hours ago)
Anonymous has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
Very Good. This is not the best way but it is the right way to be followed this time.
I hope Ahmay Su and all NLD members can handle this tough situation and our country could achieve the real democracy very ..very soon.
2 Anonymous noreply-comment@blogger.com to me
show details 6:11 PM (20 hours ago)
NLD and 90 election results are all destroyed, but there are no other way, for all opposition group must follow to junta, this is only one way, if they accepted earlier (over 20 years ago)our country will not be like this, now junta are already on top, they do not care others and they have plan, now they already get what they wanted. in parliament,NLD will not be do anythings without change Nargi Rule. just sit one side only, As Daw Su said, democracy is must follow to decided by more people, that is right. so just follow to junta decision only, when ever NLD give good or bad idea, they will against, bcz they are not thinking for country and only thinking for family.NLD re-register is good, but shouldn't be join to this election and should be arrange for next. So now all democracy are going to die...
3 Anonymous noreply-comment@blogger.com to me
show details 7:28 PM (18 hours ago)
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် မင်းကိုနိုင် က ပြောခဲ့တယ်၊ ”ကိုယ့်မှာ အင်အားရှိရင် ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းကို သိကြားမင်းတောင် တားလို့မရပါဘူး”..တဲ့ စစ်အာဏာပိုင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ NLD တို့ ပြည်သူ တို့ နဲ့ ခွဲခြားထားနှိုင်ခဲ့လို့ (အင်အား လျှော့အောင် လုပ်ထားနှိုင်ခဲ့လို့) အနှစ် ၂၀ ကျော် ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ နစ်နာမှုများသာ များခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ ဘာဘဲ လုပ်လုပ်” ဒီမိုကရေစီ အင်အားဒို့ အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်း” နေဘု့် ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ အင်အား ရှိနေဘို့ ငါတို့ အားလုံး ခေါင်းဆောင်ကောင်းရဲ့ အနောက်မှာ တစုတစည်းထဲ ထောက်ခံ ရပ်တည်နေဘို့ ဒီနေ့ အရေးကြီးဆုံး ကိစ္စ ဖြစ်တယ်လို့ အခိုင်အမာ ယုံကြည်တယ်။
4 Anonymous noreply-comment@blogger.com to me
show details 9:45 PM (16 hours ago)
မှတ်ပုံတင်တာကောင်းပါတယ်.ဒါမှ ဒီမိုကရေစီအတွက် အင်တိုက် အားတိုက် လုပ်နိုင်မှာပါ။
ပါတီလဲ အင်အား ပြုန်းတီးပြီး ဘာမှ မလုပ်နိုင်တာ နှစ် ၂၀ ရှိပါပြီ။
အဲလို မဟုတ်ရင် ကြံ့ဖွံ့က တစ်ပါတီထဲ ထင်တိုင်းကြဲနေတာကို ခေါင်းငုံ့ခံနေရမှာ။
ပြည်သူအပေါင်းကလဲ ဒီချုပ်ကို မဲပေးချင်နေကြတာ။
5 နအဖသန်းရွှေ Phd ( ငတက်ပြား)ကြံဖွိ့သိန်းစိန်Phd(ငတို) noreply-comment@blogger.com to me
နအဖသန်းရွှေ Phd ( ငတက်ပြား)ကြံဖွိ့သိန်းစိန်Phd(
ငတို) has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
6 အမေရိကန် အချက် ... တရုတ် အခက် ... သန်းရွှေတို့အကွက် ... noreply-comment@blogger.com to me
show details 11:15 PM (15 hours ago)
အမေရိကန် အချက် ... တရုတ် အခက် ... သန်းရွှေတို့အကွက် ... has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ကိုဟန်လေးရဲ့ ကာတွန်းကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန် အချက် ... တရုတ် အခက် ... သန်းရွှေတို့အကွက် ...
ကိုဟန်လေး ရဲ့ ကာတွန်းက မှန်လိုက်တာဗျာ
7 Anonymous has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
လက်ခံတယ် NLD ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာကို အားလုးံက လည်း အရင်ထက်ပိုပြီးတော့ NLD ကို ၀ိုင်းရံသင့်တယ်..။
Posted by Anonymous to ဒီမိုဝေယံ at November 18, 2011 11:22 PM
8 Anonymous has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
The result of 90 election has not been done away with but rather it has been renewed and enforced by the decision made by NLD. It has come to life now. We will watch it growing.
Posted by Anonymous to ဒီမိုဝေယံ at November 18, 2011 11:26 PM
9 min khant zaw has leftanew comment on your post "အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပါတီမှတ်ပုံတင်ရန်နှ...":
၁။ မှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် တရားဝင် နိုင်ငံရေး ပါတီဖြစ်သွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် NLD ပါတီဝင်တွေ အနေနဲ့ အစိုးရ၇ဲ့ အဖမ်းအဆီး မခံရနိုင်တော့ဘုူး (အရိုးရှင်းဆုံးတွေးကြည့်လိုက်တာ)။
၂။ အစိုးရရဲ့ မှားယွင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို တရားဝင် ထုတ်ဖော် ပြောဆိုဝေဖန်ခွင့်ရှိလာမယ်။
၃။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လို့ တရားမမျှတမှုတွေ ရှိနေသေးတာတွေ့ရင်တောင် တရားဝင် ပြောဆိုလို့ ရသွားမယ်။
၄။ လူငယ်နိုင်ငံရေး သမားတွေ အများကြီးကို အစိုးရိမ်ကင်းစွာ မွေးထုတ်ပေးလာနိုင်မယ်။ (မဟုတ်ရင် မတရားသင်းဖွဲ့စည်းမှုနဲ့ အဖမ်းအဆီး ခံနေရဦးမယ်။)
၅။ လွှတ်တော်ထဲမှာ လက်ညိုးထောင် ခေါင်းငြိမ့် လွှတ်တော်အမတ်ကိုယ်စားလှယ်ကို ပြန်လှန် ဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်မယ့် ပညာရှင်လူတော်တွေ ပါလာမယ်။
နောက် မသိသေးတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေ အများကြီး ရှိလာဦးမယ်။
၁၉၉၀ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပီးချိန်မှနအဖအဆိုးရဟာအာဏာလွှဲပေးခြင်းမရှိပဲပါတီဝင်များကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချအကြမ်းဖက်ခဲ့တာလူတိုင်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိတဲ့ သူတိုင်းဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ခဲ့(လေသံနဲ့တောင်ပြောလို့မရခဲ့)တာယနေ့အချိန်အထိအနှစ်၂၀ကျော်ပါပီ။ အခုအချိန်ကလိုချင်တာကိုပြောင်းယူဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့မြင်မိတယ်။ပြည်ပကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစကားပြောသူတွေလဲအများကြီးပါ။ဘာပြန်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲ။လေသေနတ်နဲပစ်တာကလွဲပီးဘာမှပြန်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ NLDကိုယ်တိုင်လဲအစပိုင်းမှာ၉၀ရလဒ်ကိုအတင်းဆုပ်ကိုင်ပီးအားလုံးဆန့်ကျင်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမယ့်ဒီနေ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာဟာပြည်သူ့ဘက်ကပါတီတခုပြည်သူ့ထောက်ခံမှုအမြဲရနေတယ်..ဘယ်ချိန်ပြိုင်ပြိုင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာပါ။နိုင်လို့နေရာရတော့စည်းစိမ်ခံစားဖို့ထက်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေ၊ပြောင်းလဲသင့်တာတောင်းဆိုပြုပြင်သင့်တာတွေရဲရဲဝံ၀ံတောင်းဆိုနိုင်ဖို့အတွက်သက်သက်ပဲလို့ထင်တယ်လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းငြှိမ့်လမ်းစဉ်ကိုဖျက်ဖို့၊လွှတ်တော်တိုက်ပွဲတကယ်ဝင်ဖို့ပါ။နိုင်ငံရေးဆိုတာအလှည့်အပြောင်းဗျူဟာများသလိုလူကြီးဆန်ပီးတဘက်သတ်တလမ်းသွားလုပ်လို့မရဘူးထင်ပါတယ်NLDဟာပြောပီးစကားမတည်ဘူး၊အရောင်ပြောင်းအစိုးရရဲ့လှည့်ကွက်ထဲဝင်သွားတယ်လို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့NLDဟာသူငယ်နှပ်စား၊ဘာမှကြိုမတွေးတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာ။နောက်မှာလူထုရှိတယ်။MEDIA ရှိတယ်။နိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်နေတယ်။လက်ရှိအစိုးရကော၊လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကော၊ တကယ်ပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိကြရင်အတိုက်အခံပါတီ(NLD)ဆိုတာလုံးဝမလိုအပ်ပါဘူး
Posted by min khant zaw to ဒီမိုဝေယံ at November 19, 2011 12:40 AM
10 Anonymous noreply-comment@blogger.com to me
show details 9:44 AM (4 hours ago)
This is not Demo, junta style..3 comment only able to read, others are against to Daw Su..so unable to read..your people are waiting for demo.. sure you will get soon G3 OK...
Posted by Anonymous to ဒီမိုဝေယံ at November 19, 2011 9:44 AM
iphoneမှ တစ်ဆင့် အများဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင်လိုက်တဲ့ ပိုစ့်ကြောင့် ကွန်မာန့်များ ဖတ်မရခြင်းဖြစ်ပါတယ်..။ ကွန်မာန့်ရေးသားသူများ ခင်ဗျား အခြားသူများ မိမိ၏ အမြင်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် စာလုံးနှင့် စာပိုဒ်များခွဲပြီး ရေးပေးပါရန်နှင့် ဝေဖန်အကြံပြုသူများအား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။